म विवाहित महिला हुँ। गर्भवती भएको पाँच महिना भयो। श्रीमान्सँग नियमितजसो यौन सम्पर्क भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? - E ALL NEPAL
-डा. सुबोधकुमार पोखरेल @नगारिक न्यूज बाट साभार
बुधबारको दिनमा श्रीकेदारनाथ मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर २०७५ पौष ०४ गतेको राशिफल पढ्नुहोस् । तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।।
टंक बुढाथोकी रोए, ‘चौंरीको चाम्रो हेरेपछि बुवाले रुदै फोन गर्नुभो’, के अशोक प्रयोग भएका हुन् ?(भिडियो सहित)